खोपको प्राथमिकता कसलाई ? – Himshikharnews.com
८ श्रावण २०७८, शुक्रबार १३:४१
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको पश्चिम गेटअगाडि तरकारी बेच्दै आएकी रामेछापकी ३५ वर्षीया महिला बेलुका घर पुगेपछि हरेक साँझ नुहाउँछिन् । साबुनपानीले राम्रोसँग हातखुट्टा पखालेपछि कोरोना संक्रमण हुँदैन भन्ने उनलाई विश्वास छ ।
स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलका अनुसार अहिलेको चुनौती भनेको भविष्यमा एकैपटक धेरै खोप आए कसरी व्यवस्थित भण्डारण र ढुवानी गर्ने भन्नेमा पनि छ । ‘अहिले खोप आएन भनेर तनाव भइरहेको छ, भोलि धेरै खोप आयो भने व्यवस्थापनमा चुनौती हुन्छ । त्यसैले आएको खोपलाई प्राथमिकता तय गर्दै रोलआउट गर्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १८ वर्ष माथिका सबैलाई खोप दिने विषयमा छिट्टै निर्णय हुने सम्भावना रहेको बताए ।-online khabar bata